Tozụ ahịa na Ahịa Ahịa Ahịa | Martech Zone
Tuzdee, Machị 19, 2013 Na Tọzdee, Septemba 17, 2013 Douglas Karr
Otu n'ime ohere azụmaahịa maka azụmaahịa azụmaahịa (B2B) bụ ijide okporo ụzọ maka ndị na-achọ ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-enyocha nyocha ịzụrụ ngwa ma ọ bụ na ha enweghị obi ụtọ ma chọọ ịhapụ onye na-ere ahia - na-eji okwu dịka ozo ka, ma ọ bụ yiri ya, ma ọ bụ ngwa dị ka ịkọwa nyocha ha.
Nke a bụ nnukwu ihe atụ - ọchụchọ maka uzo ozo di na Wufoo:
Formstack jiri ohere ọchụchọ a mee ihe site na iwulite ihe Pụrụ iche peeji nke na-akọwa isi ruo n'isi uru nke tinye n'ọrụMpempe akwụkwọ n'elu Wufoo. Ma, n'ezie, ebe ibe ahụ dị ezigbo mkpa, ha dị elu nke ukwuu. Aga m agba ndị ahịa ọ bụla ume ka ha bipụta peeji dị n'ime ya nke jiri ya tụnyere ngwa ha na asọmpi ha. Dị nnọọ mma ka ị ghara inye gị isi gị! 🙂
Ọzọkwa, enwere akwụkwọ ndekọ aha ole na ole n'ebe ahụ iji hụ na edepụtara gị:
ọzọ - nnukwu ndekọ nke sọftụwia ọzọ nwere ọkwa pụrụ iche na igwe nchọta ihe (ọ bụ ezie na achọpụtara m na ntinye akwụkwọ na nsonaazụ ya anaghị adịkarị).
Serchen - Injin ọchụchọ maka ịchọta igwe ojii… gụnyere nyocha.
GetApp - saịtị nyochaa sọftụwia azụmaahịa maka ịchọta ngwa.
moreofit - saịtị ndekọ nke na-achọta weebụsaịtị ndị yiri nke ahụ. Nke a gunyere igwe ojii na Software dị ka ngwa Ọrụ.
YiriSearch - saịtị ndekọ ọzọ na-ahụ weebụsaịtị ndị yiri ya. Nke a gunyere igwe ojii na Software dị ka ngwa Ọrụ.
Jide n'aka na ị jiri uru nke ọchụchọ ndị a ka ị na-akwalite azụmahịa ọhụrụ gị. Wụpụta peeji nke kachasị mma nke na-akwalite ngwa gị karịa ndị asọmpi gị. M ga-ewulite peeji nke ọ bụla n’ime ndị kachasị asọmpi. Tụkwasị na nke a, jide n'aka na edepụtara ngwa gị na injinị ọchụchọ na usoro ndị ọzọ dị n'elu. Enwere akwụkwọ ndekọ aha ọzọ ị ga-akwado? Tinye ha na nkwupụta!
Tags: ọzọ softwareozo kangwa nyocha ngwaọchụchọb2bb2b ndi ozoyiri ya